Entertainment – Page 18 – plus977.net
“धेरै बोल्दा पनि बोल्दैन, अरुका नानाभाँती कुरामा खासै चासो पनि देखाउँदैन । मान्छे भलाद्मी देखिन्छ, श्रीमती पनि भलाद्मी नै त खोज्ला नि ! ” आमाले बाबातर्फ फर्केर मेरो बारेमा बोल्नुभो । बाको जवाफ हुन्थ्यो – खै बोल्न नजानेर हो कि ? ढंग पुर्याएर बोल्न अनी बोलेका कुरा पूरा गर्न पनि त सक्नु पर्‍यो नि ! हामीले खोजेकाले नहुने होला क्या रे, जस्तो चाहिन्छ उस्तै खोज्छ जोडी । जात, भात, परिवारको, कुलको...
नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा सफल र लोभलाग्दो छबी बनाएका नायक हुन राजेश हमाल । करीब ३०० फिल्ममा अभिनय गरिसक्दा पनि एकाध सम्झन लायक फिल्मको नाम समेत भन्न नसक्ने राजेश नेपाली सिनेमाका सुपरस्टार त हुन नै तर उनलाई सक्ष्यम नायक भने मान्दैनन समिक्षकहरु । बिशेषत एकैप्रकारको अभिनय शैली , सधैं उस्तै लाग्ने गेट अप , नाच्न नजान्नु , ड्रेसिङ सेन्सको कमी आदी हमालका प्रस्ट देखिने कमजोरीहरु हुन । समिक्षकहरुले बर्सौं...